China FRP mpamokatra varavarana sy mpamatsy | Beihai Fiberglass
Varavarana 1.new-tontolo iainana namana sy mahomby amin'ny angovo, tsara lavitra noho ny teo aloha tamin'ny hazo, vy, alimo ary plastika. Izy io dia misy hoditra SMC matanjaka be, polyurethane foam core ary frame vita amin'ny plywood.
fitsitsiana angovo, sariaka ara-tontolo iainana,
hafanana insulation, hery lehibe,
lanja maivana, fanoherana ny harafesina,
toetr'andro tsara, fitoniana lehibe,
halavan'ny fiainana lava, loko isan-karazany sns.
Varavarana FRP dia vavahady vaovao mifandraika amin'ny tontolo iainana sy mahomby amin'ny angovo, tsara lavitra noho ny teo aloha tamin'ny hazo, vy, alimo ary plastika. Izy io dia misy hoditra SMC matanjaka be, polyurethane foam core ary frame vita amin'ny plywood. Izy io dia misy fitsitsiana angovo, eco-friendly, insulation heat, tanjaka ambony, lanja maivana, fanoherana ny harafesina, toetr'andro tsara, fahamarinan-toerana, faharetan'ny fiainana, loko maro samihafa sns.
● Fahafinaretana mahafinaritra
1) Tena fitoviana amin'ny varavarana hazo terebinta
2) antsipirihany ala mihintsy vita amin'ny hazo amin'ny endriny rehetra
3) Fampiarana fitsarana ambony
4) embossment tontonana avo famaritana
5) Fomba fijery sy fisehoana nohatsaraina
● Fiasa lehibe
1) Ny takelaka varavarana Fiberglass dia tsy hikorontana, tsy harafesina na ho lo
2) Ny seho avo lenta dia manohitra ny famolavolana sy ny fiadiana
3) Ny tokonam-baravarana azo ovaina mifangaro dia mametra ny fidiran'ny rivotra sy rano
● Fiarovana sy angovo mahomby
2) CFC maimaim-poana
3) Sariaka amin'ny tontolo iainana
4) 16 '' sakana fanidiana hazo sy jamb fiarovana dia manohitra ny fidirana an-tery
5) Ny fisorohana toetr'andro dia manakana ny ampahany
6) fitaratra haingon-trano telo
Antsipirian'ny varavarana Fiberglass
1.SMC varavarana hoditra
Ny fitaovana SMC dia apetraka amin'ny bobongolo ary hafanaina sy ateraky ny press iray, avy eo mangatsiaka sy miforona
1). Manana karazana famaranana 3t karazana isika (Oak, Mahogany, malama)
2). Famaritana ny hoditra SMC varavarana
● matevina: 2mm
● loko: fotsy
● Size: 2138 * 1219 (Max)
● Component: Fiberglass, polyester tsy miangona, Styrene, filler anorganika, Zinc stearate, Titanium oxide
2.Fananganana ny varavaran'ny SMC anay
Vatan-kazo (taolana) + hoditra varavarana SMC (2mm) + Pu pu (hakitroky 38-40kg / m3) + sisin'ny PVC (tantera-drano tsy azo antoka). Ny hatevin'ny varavarana dia 45mm (raha ny marina 44.5mm, 1 3/4 ")
3. lokon'ny varavarana FRP
Amin'ny ankapobeny, ny varavarana vita dia nolokoina rehefa vita. Azo zaraina ho loko famafazana sy loko maina (tanana). Ny loko nohoso-doko dia lafo kokoa, fa ny loko kosa dia misy refy telo heny ary ny andalana dia toa fiainana kokoa
4. Volavola varavarana FRP (Volavola varavarana maritrano)
5.FRP fanasokajiana varavarana
Teo aloha: Vilany voninkazo FRP
Manaraka: E-vera stitched voatetika strand Mat